Daraasad: Gabdhaha Kibirka Badan oo la ogaaday in kaga fiicanyihiin Dumarka kale + Sababta Keentgay.. | shumis.net
Home » galmada » Daraasad: Gabdhaha Kibirka Badan oo la ogaaday in kaga fiicanyihiin Dumarka kale + Sababta Keentgay..
Inta badan Magaca Dumar waa uun lawada wadaagaa hasa ahaatee dabeecadaha iyo dhaqanka ayeey ku kala duwan yihiin Daraasado kala duwan oo la sameeyeyna waxaa lagu cadeeyey in Gabdhaha Kibirka badan ay wax badan kaga wanaagsanyihiin kuwa kale.
Daraasad oo qeexday in Gabadha Kibirka badani kaga duwan yihiin kuwa kale Macaaniada Nolosha sababtoo ah waxaa la sheegay in ay inta badan jecelyihiin ineey ku noolaadaan Nolol Macaan sidaasi darteed waxa ay reerkeedu ka dhigtaa mid horumarsan.
Uma adkeysan karto Nolol dabaqadeedu hooseyso hadii ay xitaa liidato waxa ayna jeceshahay in eey asaageed u faanto , waa mid inta badan dhiira galin siiso seygeeda si ay u kasbato Nolol macaan.
Daraasada oo intaasi ku dartay in Gabdhaha kibirka badan ay ku wanaagsanyihiin wada noolaanshaha iyo Daacadnimada maadama aysan heysan dabeecad ay kula macaamulooto Ragg kale , si diirana ay ugu dhaganaanayso midka ay markaasi calfato.
Title: Daraasad: Gabdhaha Kibirka Badan oo la ogaaday in kaga fiicanyihiin Dumarka kale + Sababta Keentgay..